पूर्वमाओवादीको चेतावनी- लहरो तान्दा पहरो खस्ला ! – Nepal Online Khabar
पूर्वमाओवादीको चेतावनी- लहरो तान्दा पहरो खस्ला !
October 14, 2020 41
काठमाडौं : नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सदस्यले त्यहाकाँ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दलको कार्यालयमा दर्ता गरेपछि पूर्वमाओवादी केन्द्र सशंकित बनेको छ ।
आ,क्रो,शित प्रचण्डले बिहानै खुमलटारमा गोप्य भेला आयोजना गरेर नेता नेपालसँग सोधेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । खुमलटारको भेलामा नेता नेपालनिकट सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीलगायत नेताहरू उपस्थित रहेको स्रोतको दाबी छ ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलगायत नेताहरू थिए । केही माधव नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी थिए ।
“केन्द्रका नेताहरूको डिजाइनअनुसारै काम भएको हो भने यसको असर अन्यत्र पनि पर्छ। प्रदेश ३ मा कर्णाली वि,द्रो,ह दोहोरिनसक्छ । प्रदेश नम्बर १ मा पनि त्यो समस्या पर्छ,” एक पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताले बाह्रखरीसँग भने, “त्यहाँको पर्फमेन्स हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन।
काम पनि गर्न नदिने, गरेन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ ?” उनले पूर्वएमालेका पोलिटब्युरो र अहिलेका प्रदेशका सहइन्चार्ज रहेका यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्‍ने सपना भाँचिएकाले त्यसको प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए ।
कँडेलसहित पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रकासमेत गरी १८ सांसदले आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसले नेकपाको केन्द्रीय राजनीति तरङ्गित बनेको छ ।
Prevयी ८ कुरामा बिचार पु’र्‍याउनुभयो भने कहिल्यै पनि बैवाहिक जीवनमा झगडा पर्दैन…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
Nextदुनियाकै मनमा बसेका डाक्टर-नर्सकी छोरी सियोनालाई ग’म्भीर समस्या : उपचारमा २५ करोड लाग्ने…सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
सबैथोक नागरिकले नै गर्नुपर्ने भए सरकार किन चाहियो? चर्काे आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएन र ? सहमत हुनेले सेयर गर्नुहोस् ।